DHISMAHA BARNAANTA EE WADDANKA OO LEH GACMAHOODA - DHISMAYAASHA
Dabcan, iyada oo aan barn on sawirka waa mid aad u adag. Qalabka beerta isku midka ah ayaa duubnaa. Seeds. La goostay. Baaskiil Gaadiidka Haa, waxyaabo badan.
Si aan loo jiidin guriga oo dhan, waxaa jira daadad. Dabcan, waxaad kiraysan kartaa dhismayaasha, waxayna kuu qaban doonaan wax kasta oo adiga kugu habboon. Laakiin waxaa suurtagal ah in la sameeyo barn gacmahaaga, haddii aad ogtahay sida ciddiyaha ka duwan yahay tuubbada.
Waxay noqon doontaa mid aad u jaban. Run ahaantii, waa inaad wakhti yar qaadataa oo aad la shaqeysaa gacmahaaga iyo madaxaaga.
Daacad ku siisay
Dabcan, barn ka samaysan alwaax waa ka jaban yihiin. Haa, wayna ka sahlan tahay samaynta dhagaxa. Haddii aad isticmaasho qoryaha tayada leh, oo si habboon u shaqeynaya, tani waxay sii socon doontaa 100 sano.
Sameynta shool qufac wanaagsan leh gacmahaaga.
Baro faa'iidooyinka blueberries ee ku yaal boggayaga //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/vyrashivanie-sostav-i-poleznye-svojstva-cherniki.html.
Sida loo qalajiyo kacay miskaha Rose ee foornada halkan ka akhriso.
Bilaabida dhismaha barnadu waa inay ahaataa midka doorashada. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku dhisto meel u dhow guriga. Ugu horreyntii, si markaas oo dhan u qabato nooc kasta oo shaqo ah ee barn, waxaad arki kartaa albaabka guriga. Waxayna doorbideen gelitaanka goobta. Mar kale, u maleyso in aad u baahan tahay inaad ku ordo dabka qoryaha dabka, oo wuxuu roobka ku daadiyaa wadada.
Heerka cabbirka ayaa leh cabbir ah 3x6 mitir. Waxyaabaha ay ka kooban tahay si loo dhiso barn - qoryo iyo kuraas. Aasaasku waa tiirar. Saqafka.
Saldhig u ah barniga
Si aad u calaamadiso aasaaska dhulka, waxaad u baahan tahay tallabo cajalad ah (wakhti ka sii fiican), maro dhawr ah, midab, iyo xargaha boodhka ah. Ax ama lakab. Wax walba waa wax sahlan, keliya waxay u baahan yihiin inay hubiyaan in geesaha toosan yihiin. Si tan loo sameeyo, qiyaas taleefanka.
Qodobbada aasaasiga ah, waxaad u baahan tahay inaad qodo meelo badan oo aad qorsheyneysid. Masaafada u dhexeysa godadka waa qiyaastii 1.5 mitir. Tani waa haddii 100x100 maar oo baraf ah loo isticmaalo darbiyada dusha.
Haddii baruhu ka weyn yahay, tusaale ahaan, 150, iyo sagxada dhulka waa shan, markaa masaafadaasi waxay noqon kartaa mid ka badan. Qoto dheer ee godka waa 600-7 mm.
Ku dar lakabka isku-qasan ee isku-qasan ee 10 sentimitir godka diyaarka ah, oo tuugo lebbisan.
Goobaha iyo xarumaha dhexe ee aan khatar ahayn si loo xoojiyo biinanka birta. Kadib markii ay posts yihiin diyaar, waxay u baahan yihiin inay noqdaan mashiinka. Ka hor inta aadan buuxin safaradda, waxaad u baahan tahay inaad iyaga ula dhaqanto suuf gaar ah oo loogu talagalay difaaca biyaha.
Akhri boggayaga xarumaha faa'iidada leh ee naasaha iyo koritaanka dalka.
Baro sida loo qabto xayawaanka shinnirrada //rusfermer.net/bee/info/newbie/kak-pojmat-pchelinyj-roj-vybor-vremeni-mesta-i-sredstv.html.
Qaybta hoose ee maqaarka
Si aad ula shaqeysid bararka, waxaad u baahan doontaa shaxan alwaax ah. Iyaga ha ku darsado - kiis kasta, waxay u imaanayaan si ay u gooyaan qoryaha.
Ugu horreyntii, waxaynu soo saarnaa aasaaska muraayadda oo dhan oo ka mid ah geedaha. Barkadaha waxaa lagu biiriyaa dabaqa qoraalka. Si taas loo sameeyo, cidhibtirka dhererka ayaa si adag loo sameeyaa, qiyaastaasna waxaa lagu garaacaa feer.
Qoryaha loo isticmaalo sariiraha waa in lagu daaweeyaa dabka iyo dabeecadda bini'aadamka. Qoryaha, dabcan, si toos ah looma dhigin lebiska aasaasiga ah, laakiin biyaha korontada. Taas oo ka kooban laba qaybood oo ah qalab saqaf ah.
Birta birta ah ee leh dhexroor 10 mm ayaa lagu rakibay bararka. Dhabarka dhexrooraha isku midka ah waa in lagu sameeyaa muraayadda oo lagu rakibi doono si siman.
U istaag saldhigga qoryaha waa in uu ahaadaa biyo. Rugaha tooska ah ee hore waxay leeyihiin height 3 mitir. Baararka danbe - 2.3 mitir si aan u helno wado. Xagasha jiiradu waa 30 darajo.
Xadka sare ee barn
Haddii aan la xakamayn, lama sameyn karo. Sidaa darteed, horay waa lagama maarmaan in la isu geeyo riyaha ari ah.
Baararka cirifka ah ayaa lagu dejiyaa heerkulbeegyada iyo xayawaanka. Taas ka dib, qaybta kore ee xuddunta waxaa lagu rakibay iskudhafka. Ku dhaji geedkii hore ee gadaashiisa.
Qalabyada geedaha waa in lagu hagaajiyaa qulqulka. Fiiri geesaha leh nalka. Hadda rakibi baararka isweydaarsiga. Waxay si isku mid ah ugu xiran yihiin geesaha iyagoo gacan ka helaya naqshadeynta, ka dibna waxaannu ku dhejinaynaa 200 oo ciddiyaha iyadoo loo marayo barta toosan.
Rafters iyo dabaqa
Waxaan ka bilaabeynaa dabaqa. Dhinaca dabaqa loo dhigo guddiyada - waxay gashaa kuraasta dhulka. Horay u daaweyn iyaga ilaalin. Oo xajista. Nail ama tuubbo. Markaad dhamaato, dhulka waxaa lagu daaweeyaa diyaarad.
Gawaarida waxay isticmaalaan guddi isku mid ah sida dabaqa. Marka hore, cabbir dhererka, ha ilaawin in ay ka weyntahay xajmiga barnaanta, sababtoo ah waa inay noqotaa firfircoonid. Front - 300 mm, iyo gadaal - 200 mm. Jarida waxaa lagu sameeyaa meelo taageero ah. Raftersu waxay dejiyaan oo sugaan. Tallaabo tallaabo - 50 cm.
Dhamaan qaabka. Hadda rooggooyooyinka waa inay buuxiyaan taayirrada. Masaafada u dhexeysa kuraasta waxay kuxirantahay waxa aad ku dabooli laheyd.
Fiiri ubaxyada ubaxa: Hoosta, beerashada iyo daryeelka.
Ubaxyo Bruner ah si quruxsan u qurxin beertaada //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/brunera-krupnolistnaya-i-sibirskaya-posood-i-uhod.html.
Sidaa daraadeed waxaan helnay qalabaynta derbiga. Guddiga caadiga ah ee 25 mm ayaa qaadaya oo waxaa lagu ciriiriyaa derbiyada waddada Maraykanka. Taasi waa, guddoonada waxaa ka buuxsama hoos ugu hooseeya iyada oo isku dhafan. Isku dhejintu waa yar-3 cm.
Qalabka baakadka ee laga sameeyay wareegga, ka bilaabma xagga hore. Iskuxidhyada lagu qoondeeyay heerka.
Waa hagaag, saqafka sare ee saqafka ama kiiska kudubka ah waa mid sahlan. Xasuuso in sidoo kale sidoo kale laga rabo xagga hoose ee ka soo jeeda, iyo isku dhejis, labadaba iyo si toos ah. Qeeybaha safka ah. Marka hore, safka koowaad ee geeska illaa gees, ka dibna xiga.